တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းသော ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ၁.၆ သန်း နီပေါနိုင်ငံ လက်ခံရရှိ - Xinhua News Agency
ခတ္တမန္ဒူ၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကူညီရန် Vero Cell ကာကွယ်ဆေး ၁.၆ သန်း ပါဝင်သော ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအား နီပေါနိုင်ငံက နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်၌ လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း နီပေါ ကျန်းမာရေးနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိက ပြောကြားခဲ့သည်။“တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းတဲ့ Vero Cell ကာကွယ်ဆေး ၁.၆ သန်းဟာ နီပေါနိုင်ငံကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်” ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍ အကြီးအကဲ Upendra Dhungana က ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝယ်ယူမှုနှင့် COVAX အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် Chinese Sinopharm ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်သော Vero Cell ကာကွယ်ဆေး ၁၅ သန်းနီးပါး ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် နီပေါနိုင်ငံအတွက် အကြီးဆုံး ကာကွယ်ဆေးအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း၊ ဆေးစွမ်းထက်ပြီး ထိရောက်သော ကာကွယ်ဆေးအား နီပေါပြည်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Hou Yanqi က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျင်းပသော ကာကွယ်ဆေးများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
နီးကပ်သော မိတ်ဖက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတစ်ရပ် ခိုင်မာရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းဖြင့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမအဆိုပြုချက်အောက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အစိမ်းရောင် ဖွံ့ဖြိုတိုးတက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော ဆောင်ရွက်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ဆောင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဆင့်သင့်ဖြစ်မှုကို Hou က ပြောကြားခဲ့သည်။
“လာမယ့်နှစ် ဧပြီလလယ်လောက်မှာ လူဦးရေအားလုံး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးပို့ဆောင်မှုမှာ တရုတ်နိုင်ငံက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ အဆင်ပြေချောမွေ့မှုတွေက ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်ရှိဖို့ အလွန်ပဲ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်” ဟု နီပေါနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး Birodh Khatiwada က ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးအသစ်များသည် နိုင်ငံရှိ လူဦးရေများစွာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ရေးအတွက် ခရိုင်များစွာထံ မကြာမီ ဖြန့်ချိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နီပေါနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ခရိုင် ကိုဗစ်-၁၉ စီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာတွေက အသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ ဘယ်သူတွေ ဆေးထိုးနှံရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ အခွင့်အာဏာရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်” ကျန်းမာရေးနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အမျိုးသား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉ် အကြီးအကဲ Sagar Dahal က ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
နီပေါနိုင်ငံသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုလှိုင်းနှစ်ကြိမ် ကြုံတွေ့ခဲ့ကြောင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကမ်ပိန်းအား ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းက စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်အထိ လူဦးရေ သန်း ၃၀ ၏ ၈.၇၁ သန်းမှာ ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်စီထိုးနှံပြီးဖြစ်ကာ ၇.၃၈ သန်းမှာမူ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့အနက် ၅.၈၂ သန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ်ထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ၄.၁၆ သန်းမှာမူ တရုတ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်လုံး ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအရ သိရသည်။ (Xinhua)
KATHMANDU, Nov.3(Xinhua) — Nepal on Wednesday receivedafresh shipment of 1.6 million Vero Cell vaccine jabs granted by the Chinese government to help combat the COVID-19 pandemic,asenior official from the Nepali Ministry of Health and Population said.
“China-donated 1.6 million doses of Vero Cell vaccine arrived in the country on Wednesday afternoon,” Upendra Dhungana, chief of the Logistic Management Section under the Department of Health Services, told Xinhua.
Hou voiced China’s readiness to work with Nepal to implement initiatives relating to cooperation on COVID-19 vaccines and green development under the Belt and Road Initiative by forgingacloser partnership.
“As we are seeking to vaccinate all the population against COVID-19 by mid-April next year, cooperation and facilitation from China in delivering the vaccine are very helpful in achieving the target,” said Birodh Khatiwada, Minister for Health and Population in Nepal.
“The District COVID-19 Crisis Management Centers have been authorized to determine who should be vaccinated with the newly-arrived vaccine shots,” Sagar Dahal, chief of the National Immunization Programme under the Ministry of Health and Population, told Xinhua.
Photo : Chinese Ambassador to Nepal Hou Yanqi (L), and Birodh Khatiwada, Minister for Health and Population in Nepal, are seen atavaccine handover ceremony in Kathmandu, Nepal on Nov. 3, 2021. Nepal on Wednesday receivedafresh shipment of 1.6 million Vero Cell vaccine doses granted by the Chinese government to help combat the COVID-19 pandemic,asenior official from the Nepali Ministry of Health and Population said. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)